Apple inogona kuvhura Apple Watch Series 3 munaGunyana | Ndinobva mac
Apple inogona kuvhura Apple Watch Series 3 munaGunyana
Zvipfeko zvichiri mhando yechigadzirwa chisina kunyatso kubudirira mumusika, kunyangwe hazvo kuti vese vashandisi vatinavo, semuenzaniso Apple Watch, vanofara navo, kunyanya nekuda kwekushanda kwayinotipa, kunyanya kana tikapedza nguva yakawanda tiri kure nemba, nekuti zvinotibvumidza kubvunza uye kupindura chero rudzi rwezviziviso, angave ari mameseji kana mafoni. Chizvarwa chechipiri chakaunzwa sedzinonyanya kuverengerwa chip chip uye kuramba kwemvura, izvo zvinosimbisa kuti hunyanzvi mune ino chikamu huri kushomeka.
Zvakatora Apple makore maviri kuvhura chizvarwa chechipiri cheApple Watch, chizvarwa chakauya pasi pemazita akateedzana 1 uye Series 2 nepo rudzi rwekutanga modhi rwakanga rusina chero rudzi rwezita. Pakupera kwegore rapfuura, Apple yakaburitsa chizvarwa chechipiri cheApple Watch asi zvinoenderana nenhamba zhinji yerunyerekupe inouya kubva kuChina, Apple inogona kuburitsa chizvarwa chechitatu, kana Series 3 pakupera kwegore rino, chaizvo mumwedzi waGunyana, chishandiso chaizounzwa pamwechete neiyo nyowani iPhone.
Iko kushanduka kwemusika unosakara hauna kukurumidza sezvazvaive pakutanga munyika yefoni, saka hazvigoneke kuti gore rino, vakomana vanobva kuCupertino vanozovandudza Apple Watch zvakare. Chinhu chitsva icho vashandisi vaigona kutarisira kubva kuchizvarwa chechitatu cheApple Watch ndechekuti yakatipa mukana wekugona kushandisa chip yeLTE, iyo yaizobvisa kutsamira kuri kutipa iye zvino pa iPhone, kutsamira kune zvishoma zvadzikiswa neInorporation mune akateedzana 2 mhando dzeGPS chip, iyo inodzivirira vadikani vemitambo kutora yavo iPhone kurovedza muviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inogona kuvhura Apple Watch Series 3 munaGunyana
Zvinotanga kundinetesa kuti Apple inoita kunge yavo yekomputa chikamu chakasiiwa chose nemidziyo isingachashandi zvachose. Iyo Mac Pro, semuenzaniso, haina kuvandudzwa kwemakore matatu. Iyo Mac Mini inotakura yechina-chizvarwa processor, apo maPC atove mune yechinomwe. Vanobva vavandudza iyo MacBook Pro uye vanoiburitsa ne skylake processor, pachinzvimbo che kaby lake, iine 3Gb yekumusoro (DDR16 pachinzvimbo cheDDR3) yakanyanya pasina mukana wekuwedzeredzwa mune ramangwana uye zvakatodhura kupfuura zvakajairwa nekuda kwehupenzi hwe yekubata bar. Nekudaro nhare mbozha, ingave iphone, ipad kana iWatch kana vachizvivandudza kazhinji Chikamu chavari kutarisisa kushanda kwavo chinoratidzika kunge chakajeka uye vatengi vanotenga makomputa avo vanobviswa.
Parizvino ivo vatondisundidzira kuti nditenge PC yedesktop, nekuti ini ndaisazoshandisa 1000 maMacMini ine Hardware yechinyakare. Uye ini ndinovimba vanogadzirisa nemalaptop, zvikasadaro ndichaenderera neangu 2011 MBP, iyo yaive yakawedzera, uye ndinayo ine 512 SSD uye 16Gb yekuyeuka. Asi kana ikaperevedza, ini ndiri kutofunga nezve Surface Book 2 painobuda.
Ndakanyadziswa kwazvo neapuro, kunze kweiyo iphone, ndinofara nazvo.
Apple patent yeMagSafe kune USB-C switch yeMacBooks
Apple inoda Siri kungokupindura iwe nekuziva izwi rako